Dhageyso Wareysiga Aadan Sheekh Yuusuf Oo Ka Mid Ah Ragii Xalane Weeraray. – Calamada.com
Dhageyso Wareysiga Aadan Sheekh Yuusuf Oo Ka Mid Ah Ragii Xalane Weeraray.
calamada July 28, 2016 2 min read
Idaacada Islaamiga Andalus ee ku hadasha afka Xarakada Mujaahidiinta AlShabaab ayaa caawa baahisay Wareysi cusub oo lala yeeshay istish-haadigii labaad ee fuliyey camaliyaadkii maalma ka hor lagu weeraray Xerada Xalane ee galaaftay nolosha tobaneeyo ka tirsan ciidamada Afrikaanta.
Aadan Sheekh Yuusuf oo gudaha Xarakada Mujaahidiinta AlShabaab looga yaqaano Cabdi Qaffaar ayuu ahaa istish-haadigii labaad ee fuliyey camaliyaadkii Xalane sida ay baahisay Idaacada Islaamiga Andalus, iyadoona sii deysay wareysi dheer oo uu bixiyey walaalkaas ka hor inta uusan howlgalka u dhaqaaqin.
Wareysiga laga qaaday Cabdi Qaffaar ayaa la dhageysan karaa muddo 18 daqiiqo ah, wuxuuna kula hadlayaa ciidamada Xarakada Mujaahidiinta AlShabaab, dadka Soomaaliyeed iyo eheladiisa, isagoona dhanka kale fariimo adag u diraya gumeystaha soo duulay iyo dabadhilifyadiisa.
Cabdi Qaffaar ayaa ka dhashay beesha Shiiqaal ee degta koonfurta Soomaaliya sida ay sheegtay Idaacada Islaamiga Andalus.
Idaacada Andalus ee taabacsan Xarakada Mujaahidiinta AlShabaab waxay horay u baahisay codka Ex-Xildhibaan Saalax Nuux Ismaacii Saalax bad-baado oo ka mid ahaa raggii fuliyey camaliyaadkaas.
Saalax iyo Cabdi Qaffaar labaduba waxay camaliyaad Istish-haadi oo mataano ah ku weerareen Xerada Xalane oo ah xarunta ugu weyn ee Afrikaanta ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho.
Saalax bad-baado wuxuu ahaa Xildhibaan hore oo ka soo baxsaday DF, Waxaana horaantii sanadkii 2010-kii uu isku soo dhiibay Mujaahidiinta, waxaana markii la shaaciyey in uu ka mid ahaa raggii fuliyey camaliyaadkii Xalane rumeysan waayey in badan oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed oo ay ku jiraan xildhibaanadii iyo siyaasiyiintii ay saaxiibada ahaan jireen Saalax bad-baado.
Halkan Ka Dhageyso Wareysiga Walaalka Aadan Sheekh Yuusuf.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka Andalus 24-10-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 24-10-1437 Hijri.